Ixesha kunye nabahlobo 27
Kungenzeka ukuba uPlato wayengowokuqala ukwazi ilizwe lasentshona kunye nelizwe elilahlekileyo le-Atlantis. Abanye abamlandelayo bawuthathe umxholo kwaye bagqabaza ngobuncinci bembali awayeyinikela njengokuvela kukokhokho wakhe, uSolon, abathi wayidlulisela kuye evela kubabingeleli abadala base-Egypt yamandulo. Iintsomi ezininzi ziye zehla ngeendlela ezahlukeneyo, zesiqithi okanye ilizwekazi leAtlantis. Bacon ubhale ngayo, kodwa eyona ncwadi iphambili yile kaIgnatius Donnelly: “IAtlantis; lihlabathi leAntediluvian. ”Asicingi ukuba kukho nababhale malunga neAtlantis, abakhankanye nantoni na malunga nokuhamba ngenqwelomoya, okanye amandla eAtlanteya ukundiza.
Ngaphandle kokuba uMadame Blavatsky apapashe "imfundiso yakhe eyimfihlo" kwi-1888 yayiyiyo nayiphi na into eqinisekileyo malunga nee-Atlantic kunye nokubhabha. Kwi "Imfundiso yeMfihlo" uMama Blavatsky uthi, ngeAtlanteans, ukuhamba ngenqwelomoya ngenene kuyinyani kwaye anika imbali ngokubhekisele ekuweni kweAtlantis nendlela ukuhamba komoya kudlala indima ebalulekileyo ekuweni. U-Madame Blavatsky akabanga imbeko yokufunyanwa kwakhe. Utsho kwi "Imfihlo yeMfundiso" ukuba le nto athi yona wayeyinikwe kwimbali ye-Atlantis, ethathwe kwiirekhodi zala madoda azizilumko angafi kwaye agcina kwaye edlulisa imbali yokunyuka nokuwa kuka amazwekazi kunye nokutshintsha komhlaba kunye nolunye uguquko lomhlaba, ngokunxulumene nophuhliso lobuhlanga loluntu kunye nokuphakama nokuwa kwempucuko yalo ngalo lonke ixesha. Umbhali walo mbuzo kunye nabanye abanokuthi bangafumaneki ngo “Mfihlo yeMfundiso” uya kuba nomdla kolu luhlu lulandelayo lomsebenzi:
“Kususela kuQalo lweSine ukuba ama-Aryan okuqala afumana ulwazi malunga 'nenqwaba yezinto ezintle,' uSabha noMayasabha, abakhankanywe kwiMahabharata, isipho sikaMayasura kwiPandavas. Kuvela kubo ukuba bafunda i-aeronautics, iViwan, iVidya, 'ulwazi lokubhabha ngeenqwelo moya,' kwaye ke, ngenxa yobugcisa babo obukhulu weMeteorography neMeteorology. Kuvela kubo, kwakhona, ukuba ama-Aryan awazuza njengezona nzululwazi zibaluleke kakhulu izinto ezifihlakeleyo zamatye axabisekileyo kunye namanye amatye, yeChemistry, okanye iAlchemy, yeMineralogy, iGeology, iFiziks kunye ne-Astronomy. ”(3d Ed. Vol. II. , iphe. 444.)
"Nasi isiqwengana sebali elingaphambili kwiNgxelo yamagqabantshintshi:
''. . . Kwaye 'uKumkani omkhulu woBuso obuqaqambileyo,' inkosi yabo bonke ubuso obuMyoli, yayibuhlungu, ibona izono zabantu abaNtsundu.
“Wathumela iinqwelo zakhe zeenqwelo moya (uVimanas) kubo bonke abantakwabo (iintloko zezinye izizwe nezizwe) kunye nabantu aboyikekayo ngaphakathi, esithi: Lungisa. Sukani nime, nina bantu bomthetho olungileyo, niwele lo ilizwe nome.
'' IiNkosi zezaqhwithi ziyasondela. Iinqwelo zabo zokulwa ziyasondela emhlabeni. Ubusuku obunye kunye neentsuku ezimbini kuphela ziya kuhlala iiNkosi zobuso boMnyama (abaSihlwili) kulo mhlaba unezigulana. Uphelisiwe, kwaye kufuneka behle kunye naye. IiNkosi ezingasezantsi zeMlilo (iiGnomes kunye nezixhobo zoMlilo) zilungiselela umlingo wazo i-Agnyastra (izixhobo zomlilo ezenziwa nguMlingo). Kodwa iiNkosi zeLiso leMnyama (“iliso elingendawo”) zomelele kunazo (iziQinisekiso) kwaye zingamakhoboka ezinamandla. Banolwazi kwi-Astra (iVidya, olona lwazi lukhulu lomlingo). Yiza kwaye usebenzise eyakho (okt, amandla akho omlingo, ukuze ulwe nezobugqi). Vumela yonke inkosi yobuso obuqaqambileyo (iAnti yoMlingo oMhlophe) ibangele ukuba iVimana yazo zonke iiNkosi zobuso obuMnyama zingene ezandleni zayo (okanye ifumane), hleze nabani na (wabaSihlwili) aphume ngeendlela zayo ukuba abaleke emanzini. , thintela intonga yaBane (Karmic Deities), asindise abakhohlakeleyo (abalandeli, okanye abantu). ' ". (Ibid, iphe. 445.)
“(Kodwa) Iintlanga zayiwela ngoku kumhlaba owomileyo. Babengaphaya kwe watermark. Amakhosi abo afikelela kubo kwiVimanas zabo, kwaye abakhokelela kumhlaba woMlilo neMetal (empuma naseMantla). ' "
“'Amanzi ayesuka, kwaye egubungele iintlambo ukusuka kwelinye icala lomhlaba kuye kwelinye. Umhlaba ophakamileyo wasala, amazantsi omhlaba (imihlaba ye-antipode) yahlala yomile. Bahlala ke abasindileyo; Amadoda oBuso obuMehlo kunye namehlo athe nkqo (abantubekileyo kwaye abanyanisekanga).
“Xa bathi beNkosi yeNkosi yobumnyama yavuka kwaye yaqokelela abantu bayo baseVietnam ukuze babaleke emanzini anyukayo, babafumana bemkile. ". (ibid iphe. 446.)
Ngawo onke amathuba okuba uninzi lweengqondo ezisebenzile kwimizimba yeAtlantean ziphinde zivele kwimpucuko esakhiwayo ngoku, le mpucuko inendawo yayo e-United States ngamasebe ayo kunye namabakala amabi afikelela kuzo zonke iindawo zomhlaba. Kuzo zonke izinto ezinokubakho abavelisi beli xesha yilezo zingqondo zisebenzile okanye ezazifundiswe kwisayensi yeAtlantis kwaye ezibangela ziphinde zivele izinto ezintsha eziye zenzeka kule minyaka yethu babeqhelene nayo e-Atlantis. Phakathi kwezinto eziza kwenziwa kukubhabha. Amathuba okubhabha kwendoda, okanye ukuhamba komoya, kwagculelwa kwaye kwagculelwa ukuya kumaxesha akutshanje, kwaye iingqondo “zesayensi” zahlekisa ngesi siphakamiso okanye zathetha ngathi kukungabi nantsingiselo okanye inkolelo yabantwana. Ukuqanjwa kwenqwelomoya kwaye ibhaluni ekhangelekayo kubonakalise ukuba ukuhambisa umoya kunokwenzeka, kwaye into eyenziweyo ibonisa ukuba ngeloxesha umntu engekude umntu uya kuba nako ukuhambisa indlela yakhe ngokwasemoyeni ngokuchanekileyo njengoko ngoku eqhuba indlela yakhe. emanzini. Ingqondo yomntu iyakhawuleza ukoyisa ubunzima bokuhamba ngenqwelomoya. Kodwa okwangoku akayifumani indlela kwaye akakwazi ukunxibelelana ngeendlela zokubaleka ngokulula. Umntu unokubhabha ngokulula njengeentaka eziphaphazela ngoku, kodwa kuphela xa efundile ukunxibelelana nokusebenzisa amandla asetyenziswa ziintaka ekubalekeni kwawo. Iintaka azixhomekanga kuphela kumandla omzimba ukuze zibhabhe. Babiza ukuba basebenze amandla angengawo awomzimba kwaye onxibelelana nemizimba yabo kwaye eshukumisa imizimba yabo. Iintaka azixhomekanga kumaphiko azo ngamandla endiza. Basebenzisa amaphiko abo kunye nomsila ngaphezulu njengebhalansi okanye i-lever apho umzimba ulungelelanisiwe kwaye uqondiswe kwimijikelezo yomoya. Umntu unokwenza ngomzimba wakhe into eyenziwa ziintaka ngoku kunye nazo, okanye, umntu unokwenza oomatshini anokuhambisa umoya kuwo. Uya kuhamba emoyeni, ngempumelelo kuphela xa athe wafunda ukulungelelanisa nokunxibelelanisa amandla akuye koomatshini bokubhabha abaza kuwakha. Ukuba umntu angayenza le nto kweli xesha linokwenzeka kwaye kunokwenzeka ukuba umntu uyenzile loo nto kumaxesha adlulileyo. Kusenokwenzeka ukuba iiAtlantean zazinolwazi lwamandla enza ukubaleka kwaye zazinamandla okwenza la mandla ukuba asebenze ngemizimba yazo, ngaloo ndlela ziwenza akwazi ukubhabha, kunye nokulungelelanisa amandla afanayo koomatshini bebhanoyi, ngaloo ndlela lilawula inqwelomoya. koomatshini abanje ngokuthanda kwabo. Ingqondo iphinda yazalwe kwakhona ukususela kubudala ukuya kwesinye, ukusuka kolunye ugqatso lomzimba ukuya kolunye. Ingqondo yomntu ayifundiswanga kwaye igqibelele kuhlanga olunye okanye kwimpucuko. Kuyimfuneko ukuba ingqondo idlule kubuninzi okanye kubo bonke ubuhlanga kunye nempucuko ekukhuleni kwayo ngokuthe chu. Kusengqiqweni ukucinga ukuba iingqondo ezibandakanyeke kumbuzo okanye kukusebenza kokuhamba ngenqwelomoya ziingqondo ezifanayo eziye zajongana nengxaki e-Atlantis.
Ukuba iAtlanteans yayisombulule ingxaki yokuhamba ngenqwelomoya nangengca ayikaqinisekiswa, kwaye akuqinisekiswa ukuba iAtlantis yayikhona. Ubuncinci ayingqinwa nangubuphi na ubungqina obufunekayo kwisayensi yanamhlanje. Kunikelwe ubungqina obuninzi bokuba iAtlantis yayikhona, njengaleyo ikhankanyiweyo okanye eyabakho kuLwandle lweSargassa. Kodwa ukuba ubukho babantu abukhoyo bunokusombulula ingxaki yokuhamba komoya, akukho ngqiqweni ukucinga ukuba ubuntu e-Atlantis ngebunokuyisombulula. Ukuba ukuphindukuzalwa yinyani, kuyenzeka, ngokuqinisekileyo kuyinto eqinisekileyo, ukuba abo bahlala namhlanje bakha oomatshini abahamba ngawo umoya babelazi lengxaki yase-Atlantis, kwaye baphinde baphinda baphinda bazalwa kwakhona. kumazwe amaninzi ukusukela kumazantsi e-Atlantis. Nangona kunjalo, into eyayinokwenzeka ngexesha elinye kwimpucuko enkulu isenokungabikho ngamanye amaxesha kuyo yonke enye impucuko. Ayilandeli into yokuba ngenxa yokuba ingqondo yomntu othile icombulule ingxaki yomoya e-Atlantis kuya kufuneka akwazi ukubhabha okanye akhe oomatshini bokubhabha kweminye imizimba kwamanye amazwe nangamaxesha angenamsebenzi.
Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya yinzululwazi, nangona kunjalo, yinto enye kuphela yesayensi. Kuxhomekeke kwaye akunakukwenza ngaphandle kwezinye iisayensi. Kude kube kugqitywe ukuba isayensi ethile yenziwe kwicala elibonakalayo lokuhamba ngenqwelomoya. Ulwazi lwenzululwazi enje ngoomatshini, ngomphunga, chemistry, ngombane, luyafuneka ekuqhubeni umoya kakuhle. Nokuba loluphi na ulwazi olusisiseko ingqondo inokuba nalo ngokwalo ngokwazi nangamandla ayo kunye nokukwazi ukubhabha, okokude kube kwenziwe izixhobo zomzimba kwaye ide ingqondo iqhelane nemithetho elawula imizimba yenyama, akukho nqanawa zomoya okanye oomatshini zinokubakho yakhiwe ngempumelelo okanye isetyenzisiwe. Kumaxesha anamhlanje kuphela apho ezi nzululwazi ziye zahlaziywa okanye zafunyanwa ngokutsha. Kuphela kuxa ulwazi abalunikayo lwalusebenza okanye lusebenza ukubaleka emoyeni, kusengqiqweni ukucinga ukuba ukuqhutywa kwenqanawa kuyenzeka. Kusenokwenzeka ukuba abantu bakudala babenolwazi lwenzululwazi, kodwa basishiyile kungekho zirekhodi ezinokuthi zifuneke njengobungqina ukubonisa ukuba babenolwazi olusebenzayo lwazo zonke izayensi kunye, njengoko ngoku ziphuhliswa kancinci.
Ingqondo yomntu omnye yokuphinda azalwe kwakhona kulo naliphi na ilizwe laseYurophu okanye iAsia kwiminyaka engamawaka amahlanu edluleyo ngekhe ayifumane imeko eyimfuneko yokwakha ii-airship kwaye ibhabha kuwo. Ukuba kungenasizathu simbi, kungokungenxa yenkolo yeli lizwe bekuya kumthintela ekusebenziseni ulwazi awayenokuthi alusebenzise e-Atlantis. Umzekelo: ukuba zonke iincwadi zoncwadi lwenzululwazi yanamhlanje zisusiwe emhlabeni kwaye abanye abaqulunqi bethu abakhulu kunye noososayensi babenokufa baphinde bazalwe ngokutsha kwenye indawo yehlabathi bengadibani nempucuko yanamhlanje, eyona nto ibalaseleyo kwezi nzululwazi kunye nabavelisi Ayikwazanga ukubakho kubomi ukubonelela ngeemeko zempucuko ababezishiyile. Eyona nto banokuyenza nangokwazi ukuba babekade bephila kwaye bekwazi kwaye bekwenzile oko ngoku kwaziwa ukuba kwenziwe, akunakubenza benze into efanayo phantsi kweemeko eziguqukayo. Eyona nto banokuyenza kukwenza njengoovulindlela. Bayakunyanzeleka ukuba bafundise abantu ababephinde bazalwa ngokutsha ukuze baqonde izinto ezinokubakho kwixesha elizayo, ukuze babazi abantu ngezibakala ezithile, kwaye babafundise ukuqonda ngezingqala zezesayensi. Ubomi obunye bungabavumeli ixesha eliyimfuneko lokwakha iimeko kwaye bafundise abantu ukuba banqwenele inzuzo yanamhlanje. Kuphela nje njengokuba ezinye iingqondo zithuthukile phakathi kwabantu, kwaye iingqondo ezihambele phambili ziqhubeka nokuzibandakanya emzimbeni kwaye “zifumanisa” imithetho ethile kwaye ziphucula amashishini nezithethe zelizwe, kunokwenzeka ukuba zibe nesiseko sokusebenzela impucuko. Kuthathe iminyaka ukuba ubuntu bufundiswe kwaye bukhule buye kwimeko yabo yangoku, emva kokuba butshone ebumnyameni kulandela ukuhla kwempucuko yangaphambili. Njengoko ubuntu buvela ebumnyameni nasekungazini nakucalucalulo kwaye njengoko iingqondo zangaphakathi zisiya zikhululeka, ke into eyayikhona kwimpucuko eyadlulayo ingaphinda iphinde, iziswe kwaye igqitywe. Ngokucacileyo sisondela kwixesha lokuba iphinde yenzeke kwakhona into ethe yathathelwa ingqalelo njengemimangaliso, kodwa eya kuthi ngokuthe ngcembe ibe zizinto eziyimfuneko kunye neenxalenye zobomi bethu. Nangona abantu ababehlala kwimizimba yeAtlantean kwaye apho babehamba khona umoya, kufuneka babe baninzi baphinde bazalwa kwakhona ukusukela ekutshoneni kwe-Atlantis, kwaye nangona ixesha kunye nexesha bekuthintele ukusebenzisa kwabo ulwazi lweenqwelomoya, ixesha lisondele xa aba bantu Fowunela okwangoku ulwazi lwabo lwexesha elidlulileyo, kuba iimeko zikulungele kwaye baya kuba nako ukwenza umoya kunye nokubhabha kwixesha elizayo njengoko babeziinkosi zomoya kwi-Atlantis elityelweyo.